Kubantu abaningi u-Obama ubengumuntu othambile nje. Lokhu kwakwenziwa phakathi kokunye wukuthi akakaze abe nomlando wezempi okuyinto amaMelikana ayihloniphayo. Nokho emlandweni waleliya zwe kube nguye u-Obama othole impunga yehlathi, unogwaja ozikhundlakhundla uMnu uBin Ladin owabe esolwa yiMelika ngesehlakalo sango-11 kuMandulo ngowe-2001, lapho kwabhubha khona abantu abaningi. Nguye u-Obama owalikhipha lagcwala elokuthi ‘simtholile’ esho khona ukuthi iMelika isize yamthola unogwaja ozikhundla khudla.
Kagcinanga lapho ngoba yize abe ethembise ukuthi angeke ayiphake impi namuhla elaseMelika lingubhongoza empini yase Syria. Lapha oka-Obama ucasha ngesithupha ngoba umi kwelokuthi ‘angeke awaphake amagumgedlela’ kepha kukhona abathi asekhona vele. Izimpi zik-Obama zifaka elaseAfghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia, Yemen, Libya neSyria. Kwelase Libya wenza okufanayo ukucasha ngesithupha.